FreeChat maka WhatsApp, ngwa n'efu iji WhatsApp na Mac | Esi m mac
FreeChat maka WhatsApp, ngwa eji eji WhatsApp na Mac
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na nnukwu ụlọ ọrụ izi ozi nwere ngwa, ọtụtụ ma ọ bụ obere na n'ime mmachi, iji nwee ike iji ọrụ ha site na Mac anyị, Telegram bụ ihe atụ nke mmadụ niile kwesịrị ịgbaso, ụfọdụ ọrụ dịka WhatsApp gara n'ihu iji ọrụ ntanetị nke na-adịghị mma iji, ịghara ịkpọ ya ụzọ rụrụ arụ karị. Na Applọ Ahịa App Mac anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị na-enye anyị ohere iji WhatsApp site na ngwa izere inwe ojiji nke ọrụ ahụ dị oke egwu nke m kọwapụtara n'elu dị ka ihe ọ bụla mana ọ dị mma.
FreeChat maka WhatsApp bụ ngwa ọhụrụ batara na Mac App Store. Na mgbe m kwuru na ọ bụ n'efu na ọ bụ, ọ bụghị n'ezie. N'ime ya egosighi anyị mgbasa ozi ma ọ bụ nzụta ngwa ma ọ bụ ọkọlọtọ ... dị ka a ga - asị na ha na - amalite ịme ọtụtụ ngwa na - enwere onwe ha maka oge ụfọdụ iji nwaa ọnyà ndị ọrụ ma mesịa daba na ịzụrụ ihe na - enye obi ụtọ. Karịsịa, ahọrọla m ịkwụ ụgwọ maka ngwa ma nwee ọ andụ na ya kpamkpam karịa ịghara ịkwụ ụgwọ iji nwee ọmarịcha atụmatụ.
Ngwa a na-enye anyị ohere ịdọrọ ihe oyiyi na otu ma ọ bụ nkata iji zipụ ha ozugbo, interface dị mfe iji hụ, nzaghachi ngwa ngwa site na ebe ngosi, isiokwu dị iche iche iji hazie ngwa ahụ, ọ na-arụ ọrụ mgbe niile ka anyị agaghị enwe rụọ ọrụ ahụ oge ọ bụla anyị chọrọ ikori. Ma ọ na-enye anyị ohere nke inwe ike gbanyụọ amamọkwa nwa oge mgbe ọ na-abịakwute otu nke anyị na-ekwu okwu iji zere ịnwe mkpọtụ nke Mac ma ọ bụghị na anyị chọrọ ịchụpụ ya na windo na ọkwa dị ukwuu.
FreeChat maka WhatsAppfree
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » FreeChat maka WhatsApp, ngwa eji eji WhatsApp na Mac
♬ Jonatan ⚓ (J) on (J) dijo
ọ bụrụ na ọ ga-atụkwasị obi?
Zaghachi ♬ Jonathan ⚓ Pabon  (@JonatanPabon)
Ọ bụ bekee, ọ masị m.
Ọ bụ usoro safari dị mfe ... Mfe mana ọ bara uru
José Agudo dijo
Gaa na Telegram, nye otu puku puku na WhatsApp
Zaghachi Jose Agudo
Kedu ka o si dị iche na chitchat?
Zaghachi Luis Carlos Tovar Suárez
Enweghị m ike ịnweta mmemme iji gosi m QR ka m debanye aha whatsapp
Zaghachi Alvaro Fossi
Guillermo Gomez dijo
Kedu ka esi edebanye aha QR na ngwa WhatsApp nke ekwentị?
Zaghachi Guillermo Gómez
Etu esi wụnye onye nyocha ederede Catalan na OS X
N’ikpeazụ Kanye West weputara ọhụụ kachasị ọhụụ na Apple Music Welcome!